एक रात नर्सको कोठामा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
साहित्यपाटी : कथा
- नवीन अभिलाषी
उ एप्रोनमा अझ बढि सुन्दर लाग्छे । अझ मास्क लगाएको बेला लुकि लुकि पुलुक पुलुक गर्ने आँखाहरु झनै सुन्दर लाग्दा हुन । तर उस्को सौन्दर्य पिञ्जडामा हुन्छ सधै ।
किनकी आँखामा गाजल पर्नु हुदैन– ड्युटिको बेला । सिरु पाते ओठहरुमा लिपिस्टिक वा चिपिस्टिक केही दल्नु पनि हुदैन । अर्थात कुनै मे–कप गर्नु हुदैन । उस्लाई त्यहि सिकाईएको छ – कोर्ष पढ्दै गर्दा । अझ महत्वपुर्ण कुरा नर्स पढ्दै गरेका केटिहरुले अस्पतालमा रहदा अर्थात प््रयाक्टिसको समयमा कपाललाई समेत खुल्ला छाड्नु हुदैन । सबै केटिहरुले जस्तै उस्ले पनि कपाललाई जुरो बनाउछे । कपाल जुरो बनाउनेहरुको घाटी अग्लो मानिन्छ । त्यसमा अझ बढि सुन्दर लाग्छे – उ । किनकी मलाई अग्लो घाटी भएका केटीहरु मन पर्छ । अग्लो घाटी भएकाहरुको अनुहार टक्क मिलेको भान हुन्छ मलाई । सायद अस्पताल जानु अघि धेरै पटक हेर्छे उस्ले आफ्नो अनुहार ऐनामा । तर उ आफैलाई त्यति बेलाको अनुहार मन पर्दैन होला । किनकी विधुवाको जस्तो लाग्छ । नितान्त सेतो कपडामा ।
म भन्छु –‘तिम्रो अनुहार त रातै हुन्छ ।’
एक दिन कुनै बेहोस भएको विरामी अस्पतालमा आईपुगेछ । उपचार गरीएछ उस्को । विरामीको होस खुल्नै लाग्दा पुरा मे–कप गरेकी, कपाल छोडेकी, लाली पाउडर लगाएकी नर्समा पहिलो नजर परेछ त्यस विरामीको । त्यस पछि त त्यो विरामी फेरी ‘स्यूट’ भएछ । त्यसदिन देखि नर्स पढ्दै गरेका सबै केटिहरु ‘सिम्पल’ भएर ड्यूटिमा जानु पर्ने भएछ । यो कुरा उसैले सुनाएकी ।
विरामीलाई झनै विरामी बनाउने त्यो नर्स कति नराम्री थिई होला । मलाई सोची सोची हाँस्न मन पर्छ ।
मेरो जीवन… न छेउ छ न टुप्पो भएको । कहिलेकाही अर्काको जीवन देखेरै रमाउन मन पर्छ । आफ्नो केहि भए पो मन रमाउन लायक । साच्चै केहि छैन । शहरले अध्यारो बर्कि ओढीसकेको छ । तर कोलाहल बढि नै छ वरपर । मान्छेको चहलपहल पनि उस्तै । घोराहीको महायज्ञ स्थल साँझको समय । मान्छेहरु भजनमा नाचिरहेका छन । उस्ले अनुहार छोपेकी छ, दुई आँखा मात्र देखिने गरी । कुनै मुस्लिम मुलकी युवती जस्तै देखिएकी छ उ । उस्का आँखा मंगोलियन मुलका छन । तर परेली बढो सुन्दर लाग्छ मलाई । उस्लाई भनेको पनि छु । उ हाँसी मात्र । कुर्तामा छे उ । सधै जिन्स र टिसर्टमा देखेको उस्लाई कुर्ता सलवारमा देख्दा कस्तो नराम्री नराम्री देखिएकी ।
उस्को कपालको सुगन्ध मेरो नाकको सुरुङ भित्र पस्यो । उस्को शरीरमा हल्का कपडा थियो । त्यो कपडाले म भित्रको पुरुषोत्तम जगाईरहेको थियो । तर म एउटा पुरुष मात्र थिईन ।
भित्रै देखि प्रेम गरेको छु उस्लाई तर हैसियत उस्लाई प्रेम गर्ने त के ? उस्को घरमा काम गर्न बस्ने खालको पनि छैन मेरो । तर रहरहरु धावनमार्ग मै छन । गुड्न र उड्न चाहिरहेका छन । सपनाहरु अझै रंगमञ्चमा छन । नयाँ नयाँ दृश्यहरु प्रर्दशन गर्न लालायीत छन । मेरो र उस्को दिन भरको ब्यबस्तताबाट भागेर जिन्दगीको यो साझमा एउटा सानो याद सजाउ भन्ने लागेर उस्कालाई बोलाएको थिए । भेट हुन । उस्लाई देखेपछि धेरै धेरै थोक पोखिएको महसुस हुन्छ जिन्दगीको झोलाबाट । उ पोखिएकी कुनै पात्र हो मेरो रहरको ।
कोठामा ताल्चा झुण्डाएर आएकी छ उस्ले । त्यो ताल्चा पीङ खेल्दै छ होला यतिबेला ।
‘खाना खाएकी छैन ।’ पातलो कम्मर समाएर उ बोल्छे ।
‘आज संगै खाउनँ त होटेलमा’ तर उस्ले मानिन । म फुर्सद हतारमै र हतार फुर्सदमै बाँच्ने एउटा अर्धबेरोजगार केटो । हामी छुट्टियौ सहिदगेटबाट । हातमा रहेको सामसुङ ग्गालेक्सी हेर्दै उ तुलसीपुर चौक तिर लागि कोठा तिर । कालो रंगले उस्लाई ननिल्दा सम्म नियालीरहे मैले ।
बाटो छिचोल्न निक्कै गारो । धेरै नै गारो । जिवन जति मुलधारमा रहेपनि बाटो हिड्नै गारो हुने । बाटो र यात्राको मान्यता र औचित्य यसैमा अर्थपुर्ण हुन्छ होला । उस्को कोठा हरीयो रंगको छ । भित्तामा अडेस लाग्यो कि कमिज भरी हरियै रंग लाग्ने । एउटा खाट केहि किताबहरु छन मोटा मोटा । म दुब्लो मान्छेको लागि ति किताबहरु चुनौतीपुर्ण पहाड जस्ता लाग्छन । उ नाँच्ने कोठा हो यो । उस्का हत्केला, पाउहरुले छुने भाँडाहरु, किताबहरु र धेरै धेरै थोकहरु छन् यँहा ।
नजिकैको घरमा एउटी केटि बस्छ जस्ले निक्कै चियो चर्चो गर्छ । उस्लाई डर छ आफ्नै नैतिकताको । म पुरुष मानिएको मान्छे उस्को कोठामा यो रातको छातीमा टेक्दै आउनु हुदैन । तर मनले छुट्टीनै मानेन । कम्तीमा यो रात एउटा अविस्मरणीय होस् । समझन लायक होस् उस्ले पनि यस्तै सोची होला सायद । मैले के सोचेँ त्यो भन्न मिल्दैन । एउटा केटा मान्छेको सोच ।
‘तपाईँ खाटमा सत्नुस्, म भुईमा सुत्छु ।’ कपाल मिलाउदै भन्छे ।
उस्ले संगै सुतम् किन भनिन ? म चै उस्को घाटमा किन सुत्नुपर्ने ? सुतिन । सुत्नलागि आएको हो र म सुत्नको लागि मेरै गोठ जस्तो कोठा छ नी । त्यसैले सुतिन । सुत्न भन्दा पनि मलाई उस्को कुरा सुन्न र धेरै थोक भन्न मन थियो ।
भुतको जन्ती हिड्ने समय हो यो । ठिक १२ बजे । यति ठुलो घरमा आज उ र म बाहेक कुनै चल्ने प्राणी छैनन । तर हामी नचलेर बसेका छौ । मात्रै मुख प्यार – प्यार पारेर । भुतको कुरा ग¥यो कि कानमा औला हालेर बस्छे । डरले । केटिको मुटु पनि कत्रो हुन्छ कुन्नी ? भन्न लागेको थियो र छाम्न मन लागेको थियो – ‘खै खै तिम्रो मुटु कहाँ नेर छ ?’ तर भनिन ।
हात्तिपाईले रोग विरुद्धका औषधी एक प्याक राखेकी थिई कोठामा । जुकाका औषधीहरु पनि थिए । भर्खरै अभियान सकिएको छ ।
‘यहि औषधीको नास्ता गछौ ?’ उस्ले खित्का छोडेर हाँस्न थाली । कम्ती मिठो छैन उस्को हाँसो । रेकर्ड गरेर राख्नु पर्ने म्युजियममा ।
‘अँ कराईमा फ्राई गरेर खान्छु ।’ उस्को जवाफमा झन धेरै हाँसो थियो तर म त्यति धेरै हाँसिन । म हासो हराएको मान्छे । हरिबंश आचार्यको त चिना मात्र हराएको हो ।
औषधीसंग प्रेम भएकी मान्छे भने होईन उ । औषधीको गन्ध उस्लाई दुर्गन्ध लाग्छ । तर कमसेकम विषका कुरा गर्दीन । त्यसैले उ बाट धेरै आसा हो । मेरो जीवनलाई पनि औषधी खुवाओस । सडक पेटीबाट उठाएर मेरो जीवनलाई तातो पानी खुवाओस । रात विस्तारै छिप्पीदै छिप्पीदै हिडिरहेको छ । उस्को नाम हिड्नु संग बढि सम्बन्धीत हुन्छ ।
‘विरामीको हातमा सुई रोप्न लास्टै राम्रो लाग्छ ।’ उस्ले नयाँ बोली मेरो लागि – ‘तर कहिलेकाही नशै भेटिदैनन् र कस्तो झ्याउ लाग्छ भने ।’
‘राम्रो संग सुई रोप्न त ढंग हुनुप¥यो नी ?’ मैले भने ।
उस्ले मुख बङग्याई । उसलाई मन नपरेको उस्को आफ्नै बानी तर मलाई बहुत मन परेको उस्को मुख बंग्याउने शैली । मन पराउने र नपराउने कुरा निजि जीवनको शैलीले प्रभाब पार्छ । उ छटपटिईरहेकी छे । कहिले तल मेरो नजिक बस्छे । कहिले खाटमा बस्छे । कहिले पानी पिउछे । कहिले बाथरुम बस्छे ।
‘तिमीहरु मान्छेको शरिरलाई प्रयोगशाला बनाउछौ ।’ सुई रोप्ने सन्दर्भलाई मैले निरन्तरता दिएँ । उस्ले आँखा ठुलो बनाई ।
‘कहिलेकाही त विरामीले कम्ती वाक्क बनाउछन । रिस उठ्छ सुईमा विष भरेर लगाई दिउ जस्तो लाग्छ ।’ – प्वाक्क बोली । अघि सम्मको सपनालाई एका एक आणविक बम खसेको हिरोसिमा र नागासाकी बनाई । मैले आफ्नै नियति भनेर आफैलाई सम्झाए ।
‘जिउ भारी बुद्धि डाडापारी हुनेहरु यस्तै गर्छन ।’
ओरालो लागेको रात । समय छोटो हुदै गयो मान्छेको आयु जस्तै । केहि समय पछि म यो कोठाबाट निस्कनु पर्ने छ उज्यालो पुर्वको डाडाबाट नटेक्दै । उस्को कापीमा उस्का अक्षरहरु हेरे । झुण्याईएका कपडाहरु छन जो कपडा उ विना विर्जिब लाग्छन । अर्थात सबै सबै बस्तु उ विना निर्जिब लाग्छन । तर उस्ले छोई भने सबै सजिब भएको महसुस हुन्छ । उ मेरो नजिक थिई मोबाईलमा फोटोहरु हेर्दै गर्दा राती साडे तिन बजे तिर लाईन हिड्यो । लोडसेडिङको अनुहार लिएर हिड्यो कोठालाई एकाएक अध्यारो बनाएर । अब कोठामा हाम्रो आवाज मात्र बाकि रह्यो ।
अब चै कथाको विषय फेरीयो । उस्को कपालको सुगन्ध मेरो नाकको सुरुङ भित्र पस्यो । उस्को शरीरमा हल्का कपडा थियो । त्यो कपडाले म भित्रको पुरुषोत्तम जगाईरहेको थियो । तर म एउटा पुरुष मात्र थिईन । तर उस्को शरिरको सुगन्धले बशमा रहन दिदैन । मैले उस्लाई आफ्नो नजिक ताने । उस्को ओठको स्पर्श थाहा पाए । त्यो भन्दा बढि लेखिएन कुनै रंगहरु । उस्को र मेरो नैतिकताले दिएन । मेरो त के उस्को नैतिकताले दिएन । यो अध्यारो जिन्दगीको एउटा पाटो हो । जँहा थुप्रै रहस्यहरु हुन्छन । भन्न खोजे भन्दा पनि फरक । बोल्न खोजे भन्दा पनि फरक । बताउन खोजे भन्दा पनि फरक धेरै धेरै फरक कथा र पात्रहरु हुन्छन अध्यारो भित्र । उस्को र मेरो विचमा पनि एउटा रहस्य थियो त्यो ।
म निस्किए । उस्को कोठाबाट । उस्को स्पर्शबाट टाढिएँ । जुत्ताको टक टक आवाज छोडेर निस्किए । फेरी यस्तै रात आओस नआओस् कुनै प्रबाह भएन । मैले प्रेम गर्ने एउटी केटिको पोल्टोमा पोख्न चाहन्थे केहि सुकुमार यादहरु । जो यादहरु यस्ले बारम्बार सम्झना सकोस् । कुनै जमानामा म भएको महसुस होस । होला नहोला त्यो जे होला ।
उस्ले पढि या पढिन मैले उस्को कापीमा लुकेर लेखेका केही शब्दका थुंगाहरु । जुन थुंगाहरुमा मेरो मुटुका केहि स्पन्दनहरु थिए । भेटि या भेटिन । मेरो चिरा चिरा परेका सपनाहरुको भग्नाबशेष । ति सपनाका टुक्राहरुले उस्को जीवनमा उस्को रहरमा उस्को दैनिकीमा के फरक पार्ला । म कुनै बाटोमा भेटिएको एउटा निम्छरो मान्छेको रहरले ।।